နယူးဗီဇကုထုံးကလေးဘဝကိုယ်ခံစွမ်းအားအခွအေနေကိုပျောက်ကင်းစေခြင်းငှါ - သတင်း Rule
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “နယူးဗီဇကုထုံးကလေးဘဝကိုယ်ခံစွမ်းအားအခွအေနေကိုပျောက်ကင်းစေခြင်းငှါ” ဟန္န Devlin ကရေးသားခဲ့, သိပ္ပံပညာကသတင်းထောက်, theguardian.com အင်္ဂါနေ့ 21 ရက်ကဧပြီလအပေါ်များအတွက် 2015 17.01 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
ကုသမှုမရှိရင်, Wiskott-Aldrich syndrome လို့ခေါ်တဲ့ရှားပါးခွအေနအေကနေခံစားတဲ့သူလူနာ, ဆေးရုံအတွက်တိုတောင်းသောသက်တမ်းနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာကာလကိုရင်ဆိုင်.
ဂရိတ် Ormond Street, ဆေးရုံတွင်ဆရာဝန်များ, အောင်မြင်စွာစမ်းသပ်ဦးဆောင်ခဲ့သူ, တွေ့ရှိချက်မျိုးဗီဇကုထုံးတစ်ခုအပြောင်းပွိုင့်အမှတ်အသားနှင့်ပိုပြီးဘုံအခွအေနအတွက်အသုံးပြုခံရဆင်တူတဲ့နည်းပညာတွေအတွက်လမ်းခင်းနိုင်ကပြောပါတယ်, တံစဉ်ကိုဆဲလ်ရောဂါနှင့် thalassemia အပါအဝင်.
ပါမောက္ခ Adrian Thrasher, အလုပျကိုဦးဆောင်သူကို immunologist, ကပြောပါတယ်: "ဒီမျိုးဗီဇကုထုံးရှုပ်ထွေးပြီးလေးနက်သောမျိုးဗီဇရောဂါဝေဒနာရှင်များအတွက်အလွန်အမင်းထိရောက်သောကုသမှုပေးနိုင်ပုံကိုတစ်ဦးအလွန်အစွမ်းထက်ဥပမာဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာအစ excitingly လက်ရှိကုထုံးမကျေနပ်ကြသို့မဟုတ်အသုံးမပြုနိုင်ဖြစ်စေနေသောအခြားရောဂါများ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်၏ကုသမှုများအတွက်အလားအလာပြသသည်။ "
Related: GM ကဆဲလ်တွေကိုသုံးပြီး HIV ပိုးဗီဇကုထုံးစမ်းသပ်မှုအပြီးအောင်မြင်မှုချီးကျူးလိုက်ပါတယ်
အဆိုပါတွေ့ရှိချက်သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်အတွင်းအများအပြားအခြားအပြုသဘောရုံးတင်စစ်ဆေးရလဒ်များကိုအတိုင်းလိုက်နာ, သောသိပ္ပံပညာရှင်များဗီဇကုထုံး၏ဂတိ Over-ဖောင်းပွခဲ့ကြောင်းစွပ်စွဲငြိမ်ဝပ်စွာနေမှချပြီးနေကြပါတယ်လို့ပြော.
အမ်မာမောရစ်, လက်ရှိတွင်သွေးကင်ဆာများအတွက်မျိုးရိုးဗီဇကုထုံးစမ်းသပ်မှုဦးဆောင်သူ University College London မှတစ်ဦး immunologist, ကပြောပါတယ်: "လူတွေကဆယ်နှစ်ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြနှင့်ကယခုသင်လုံခြုံစွာဗီဇဆဲလ်များကိုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်လူဦးသို့သူတို့ကိုငါမိတ်ဆက်ပေးနိုငျသောအဖြစ်မှန်ဖြစ်လာတာပဲ" ဟုပြောသည်။
နောက်ဆုံးပေါ်လေ့လာမှုမှာ, Wiskott-Aldrich syndrome ရောဂါနှင့်အတူခုနစျပါးကလေးများ (ဖွစျသညျ) ပဲရစ်ဂရိတ် Ormond Street, ဆေးရုံနှင့်သီးခြားဆေးခန်းမှာကုသခဲ့သည်.
အဆိုပါမျိုးဗီဇအခွအေနေတစျခုအကြားနှင့်သာသက်ရောက်သည် 10 ခပ်သိမ်းသောသန်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကလေးများနှင့်ရောဂါကူးစက်စစ်တိုက်ခြင်းငှါသူတို့၏စွမ်းရည်ကိုလျော့ကျစေပါတယ်. ရောဂါလက္ခဏာများသွေးထွက်ဖြစ်စဉ်များပါဝငျနိုငျ, နှင်းခူနှင့်အခြားမှုများထပ်တလဲလဲအရေပြားရောဂါကူးစက်မှုများနှင့် autoimmune ရောဂါ, နှင့်ပြင်းထန်သောဖြစ်ရပ်များအတွက်ကလေးများဆေးရုံအတွက်အချိန်အကြာကြီးဖြုန်းဖို့လိုအပ်နိုင်ပါတယ်.
အခွအေနကျန်းမာအလှူရှင်ထံမှရိုးတွင်းခြင်ဆီအစားထိုးအတူအောင်မြင်စွာကုသနိုင်ပါသည်, ဒါပေမဲ့ဒီလူနာဘို့အကောင်းတစ်ပွဲစဉ်ကိုရှာဖွေအပေါ်မှီခို. "သင်ကောင်းတစ်ဦးပွဲစဉ်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုရငျ, ကုသမှုရှုပ်ထွေးသည်နှင့်မူးယစ်ဆေးအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်,"Thrasher ကပြောပါတယ်.
သစ်ကုသမှုများအတွက်, သိပ္ပံပညာရှင်တို့သည်သားသမီးရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရိုးခြင်ဆီ ယူ. မျိုးရိုးဗီဇလူနာရဲ့ခုခံအားဆဲလ်များထဲသို့ပျက်ယွင်းနေမျိုးဗီဇတစ်ခုအလုပ်လုပ် version ကိုမိတ်ဆက်ပေးမယ့်အန္တရာယ်ဗိုင်းရပ်စ်ကိုသုံးပြီးပြုပြင်ထားသော.
အမြိုးသားတို့ကိုလည်းဓါတုဆေးသွင်းကုသမှုပေးခဲ့, သောခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လက်ရှိအရိုးခြင်ဆီအချို့ကိုဖျက်ဆီး, ထိုမျိုးဗီဇပြုပြင်ထားသောဆဲလ်အစားထိုးမီ.
ကုသမှုအောက်ပါ, အမြိုးသားတစျဦးသေဆုံး, ကုသမှုဖို့သက်ဆိုင်တဲ့ Pre-လက်ရှိပြဿနာများမှ. အခြားကလေးခြောက်ယောက်ရဲ့ကိုယ်ခံအားစနစ်ထူးခြားတဲ့ပြန်လည်နာလန်ထူပြသနှင့်၎င်းတို့၏လက္ခဏာတွေအများဆုံးဖြေရှင်းခဲ့ကြ. နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်း, လူနာပျမ်းမျှဖြုန်းနေလေ၏ 25 ထိုနောက်ဆေးရုံရက်ပတ်လုံး tozero အမျိုးဗီဇကုထုံးမီကဆေးရုံမှာရက်ပတ်လုံး.
ဒံယလေသ Wheeler က, ရုံးတင်စစ်ဆေးအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူတဲ့သူ Bristol ကနေ 15 နှစ်အရွယ်, ကုသမှုသူ့ကျန်းမာရေးအသွင်ပြောင်းခဲ့သည်ဟုဆိုသည်. "ကောင်းပါတယ်. ငါလျော့နည်းအလွယ်တကူတွေအများကြီးကြိတ်, ငါဘယ်နေရာမှာမဆိုအဖြစ်များစွာသောဆေးကိုအနီးအပေါ်မပေါ့နဲ့ကျွန်မတစ်ဦးပညာရေးပိုလာပြီပေါ့,"ဟုသူကဆိုသည်.
"ကျနော်တို့စကားလုံးကိုသုံးလိုကြဘူး '' ရောဂါပျောက်ကင်း '', ဒါပေမဲ့သမျှသောဤလူနာပြင်းထန်တဲ့ရောဂါနှင့်ရောဂါလက္ခဏာခဲ့ပေးထား, ကတော်တော်လေးအများကြီးထိုသူအပေါင်းတို့အတွက်ဖြေရှင်းပြီး,"Thrasher ကပြောပါတယ်.
သူ့အဖွဲ့ယခုတံစဉ်ကိုဆဲလ်ရောဂါနှင့် thalassemia နှင့်အတူလူနာအသစ်စမ်းသပ်မှုတွေစတင်နိုင်ရန်မျှော်လင့်နေကြသည်, ဗြိတိန်မှာအသုံးအများဆုံးအမွေဆက်ခံမျိုးရိုးဗီဇချို့ယွင်းတို့တွင်အရာများမှာ.
အဆိုပါသိပ္ပံပညာရှင်များအချို့ယခင်ဗီဇကုထုံးစမ်းသပ်မှုများတွင်သိသိသာသာပြဿနာကိုကျော်လွှားဖို့ပေါ်လာ, ထိုဖြည့်စွက်ဗီဇအန္တရာယ်ရှိသော "ချွတ်ပစ်မှတ်" သက်ရောက်မှုများရှိခဲ့ပါတယ်ဘယ်မှာ, ကင်ဆာ-မြှင့်တင်မျိုးဗီဇအပေါ် switching အပါအဝင်. ယခင်က, အခြားကိုယ်ခံအားအခြေအနေမျိုးဗီဇကုထုံးပေးထားအချို့သောကလေးများ, ထိုကဲ့သို့သော SCID အဖြစ် (ပူဖောင်းကလေးကိုရောဂါ), စပြီ ကုသမှုတစ်ခုဘေးထွက်သက်ရောက်မှုအဖြစ်သွေးကင်ဆာဖွံ့ဖြိုး. "ဒီပြဿနာကသူတို့သိမ်းကျုံးအခြားမျိုးဗီဇအပေါ်ဖွင့်ဖို့ထိန်းခဲ့, ကင်ဆာရောဂါမျိုးဗီဇအပါအဝင်,"Thrasher ကပြောပါတယ်.
နောက်ဆုံး technique ကို DNA ကိုတစ်ဦးပိုရှည်အပိုင်းအစထည့်ဖွငျ့ဤကျော်လွှားခဲ့ကြပုံ, ထိုဗီဇကိုပိုမိုထိရောက်စွာသူ့ရဲ့ action ကိုထိန်းချုပ်ရန်ပေါ်လာသောတစ်ဦးထက်ပိုသည့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၌ကျိန်းဝပ်သည်အဓိပ္ပာယ်.
ရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်း၏ရလဒ်များသည် "အလွန်အထင်ကြီး" ဖြစ်ပါသည်, မောရစ်သည်နှင့်အညီ, အဘယ်သူသည်ယခုပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူနာပါဝင်လိမ့်မည်ဟုရုံးတင်စစ်ဆေးတစ်ခု extension ကိုအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်သည်. "ဒါဟာလူနာကုသပို့ဆောင်၏တစ်ဦးအလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့လမ်းရဲ့,"ဟုသူမက aded. "ပြဿနာကိုစနစ်တကျအလုပ်မလုပ်ပါဘူးတဲ့ဆဲလ်ဖြစ်တဲ့အခါ, မျိုးဗီဇကုထုံးမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဝါးအောင်မြင်ရန်နိုင်မည်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ဟုကုသမှုပုံစံတပေးထားပါတယ်။ "
24311	0 အပိုဒ်, မျိုးရိုးဗီဇ, ဟန္န Devlin, ရောဂါပြီးပညာ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနများ, သတင်း, သိပ္ပံ, ဗြိတိန်သတင်း
← သိပ္ပံပညာရှင်များသည်တိရစ္ဆာန်ဘဝဖြုန်းရပ်တန့်ဖို့ကိုပြောသည် Next Post →